February 2022 - Shwe Pann Thee
နာမည်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်တောင် မုန်းတဲ့ အလှတရားရဲ့ လက်တွေ့မကျဆုံးနဲ့ အဆိုးဆုံး ဖိုတိုရှော့ရိုက်ချက်များနာမည်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်တောင် မုန်းတဲ့ အလှတရားရဲ့ လက်တွေ့မကျဆုံးနဲ့ အဆိုးဆုံး ဖိုတိုရှော့ရိုက်ချက်များ
နာမည်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်တောင် မုန်းတဲ့ အလှတရားရဲ့ လက်တွေ့မကျဆုံးနဲ့ အဆိုးဆုံး ဖိုတိုရှော့ရိုက်ချက်များ ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် လူတိုင်းကို မိမိတို့ဖြစ်ချင်သည့် ပုံစံအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးနိုင်သော ကွန်ပြူတာပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Photoshop ကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ နှစ်တွေကြာလာသည်နှင့်အမျှ လူတော်တော်များများသည် ၎င်းတို့၏ ရုပ်ပုံတစ်ဝိုက်ရှိ ...
သက်သတ်လွတ်စားသူများနှင့် အသားလျှော့စားသူများသည် အသားစားကြီးသူများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေနည်းပါးကြောင်း လေ့လာမှုကဆိုထားသက်သတ်လွတ်စားသူများနှင့် အသားလျှော့စားသူများသည် အသားစားကြီးသူများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေနည်းပါးကြောင်း လေ့လာမှုကဆိုထား
သက်သတ်လွတ်စားသူများနှင့် အသားလျှော့စားသူများသည် အသားစားကြီးသူများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေနည်းပါးကြောင်း လေ့လာမှုကဆိုထား တစ်ပတ်လျှင် အသားငါးကြိမ်ထက် ပိုစားသုံးခြင်းသည် ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ မြင့်မားကြောင်း သုတေသနပြုချက်များအရ သိရသည်။ အသားလျှော့စားခြင်း သို့မဟုတ် သက်သတ်လွတ်အစားအစာများကို စားသုံးသူများသည် အချို့သောကင်ဆာရောဂါများ ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းကြောင်း ယခုအပတ်ထုတ်ဝေသော ...
ပိုက်ဆံခိုးဖို့ အမျိုးသမီး ၁၈ ယောက်ကို အယုံသွင်းလက်ထပ်ခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယက ကွင်းဆက်လူလိမ်ပိုက်ဆံခိုးဖို့ အမျိုးသမီး ၁၈ ယောက်ကို အယုံသွင်းလက်ထပ်ခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယက ကွင်းဆက်လူလိမ်
ပိုက်ဆံခိုးဖို့ အမျိုးသမီး ၁၈ ယောက်ကို အယုံသွင်းလက်ထပ်ခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယက ကွင်းဆက်လူလိမ် အိန္ဒိယတွင် ကွင်းဆက်လူလိမ်တစ်ဦးသည် အမျိုးသမီး ၁၈ ဦးကို အယုံသွင်းကာ လိမ်လည်လက်ထပ်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ Bibhu Prakash Swain အသက် ၆၇ ...
ရွှေတိဂုံဘုရားအား စောင့်ရှောက်သော နတ်နှင့် ဘီလူးများအကြောင်း….ရွှေတိဂုံဘုရားအား စောင့်ရှောက်သော နတ်နှင့် ဘီလူးများအကြောင်း….
ရွှေတိဂုံဘုရားအား စောင့်ရှောက်သော နတ်နှင့် ဘီလူးများအကြောင်း…. ရွှေတိဂုံဘုရားသည် ဘုရား(၄)ဆူတို့၏ ဓာတ်တော်၊ မွေတော်များ ရှိပြီး လွန်စွာ တန်ခိုးကြီးလှ၏။ ရှေးခေတ်မင်းအဆက်ဆက်တို့ ကိုးကွယ်ခဲ့ကြပြီး အဖိုးမဖြတ်နိူင်သော ဌာပနာများကိုလည်း ထည့်သွင်း ခဲ့ကြလေသည်။ တာဝတိ့သာနတ်ပြည်မှ သိကြားမင်းကိုယ်တိုင် ဦးစီးကာ ...
အိမ်ထောင်ကျပြီး အမျိုးသမီးတွေ လှပလာတယ် ဆိုတာဟာ……အိမ်ထောင်ကျပြီး အမျိုးသမီးတွေ လှပလာတယ် ဆိုတာဟာ……
အိမ်ထောင်ကျပြီး အမျိုးသမီးတွေ လှပလာတယ် ဆိုတာဟာ…… ၁။ ခင်ပွန်းသည်က စိတ်ချမ်းသာအောင် ထားလို့တစ်ချို့ အမျိုးသမီးတွေ အိမ်ထောင်ကျပြီးမှပိုပိုလှလာတာကို တွေ့ကြမှာပါ။အဲဒါ ဘာကြောင့် လှပလာရသလဲ ဆိုတဲ့အကြောင်းများစွာ ထဲမှာမှ ခင်ပွန်းသည်ကစိတ်ချမ်းသာအောင် ထားတဲ့ အချက်လည်းသင်​ မမေ့ပါနဲ့။ ၂။ ...
အမျိုးသားတစ်ဦး၏ နှာခေါင်းအတွင်း၌ ပေါက်နေသော သွားကို နယူးယောက်မှ ဆရာဝန်များက ဖယ်ရှားပေးခဲ့အမျိုးသားတစ်ဦး၏ နှာခေါင်းအတွင်း၌ ပေါက်နေသော သွားကို နယူးယောက်မှ ဆရာဝန်များက ဖယ်ရှားပေးခဲ့
အမျိုးသားတစ်ဦး၏ နှာခေါင်းအတွင်း၌ ပေါက်နေသော သွားကို နယူးယောက်မှ ဆရာဝန်များက ဖယ်ရှားပေးခဲ့ နယူးယောက်မြို့ရှိ ဆေးရုံတစ်ရုံမှ ဆရာဝန်များသည် ညာဘက်နှာခေါင်းပေါက်တွင် အသက်ရှူရခက်ခဲကြောင်း ညည်းညူလာသူ အမျိုးသားတစ်ဦး၏ နှာခေါင်းအတွင်း၌ သွားတစ်ချောင်းပေါက်နေသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ New York ရှိ ...
လက်ဖက်ရည် သောက်တတ်သူတိုင်း ကျော်မသွားပဲကြည့်သွားစေချင်လက်ဖက်ရည် သောက်တတ်သူတိုင်း ကျော်မသွားပဲကြည့်သွားစေချင်
လက်ဖက်ရည် သောက်တတ်သူတိုင်း ကျော်မသွားပဲကြည့်သွားစေချင် လက်ဖက်ရည် အချိုသောက်ရင်ဖြင့် အသက်တွေ အမှန်ပျောက်ကြမှာမို့ ဆင်ခြင်ကြဖို့ ကြည့်စေချင်(လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေက ပြန်သိမ်းလာတဲ့ အချိုခြောက် အဟောင်းတွေကို နေလှမ်း လွှစာမှုန့်ရော အရောင်ဆိုး အနံ့ဖြန်းပြီး ပြန်ရောင်းကြပါသည်) လက်ဖက် အစို နဲ့ ...
ဂင်းနစ်ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ဖို့အတွက် လက်ဖမိုးပေါ်မှာ ကြက်ဥ ၁၈ လုံးကို ချိန်ညှိပြခဲ့တဲ့ အီရတ်အမျိုးသားဂင်းနစ်ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ဖို့အတွက် လက်ဖမိုးပေါ်မှာ ကြက်ဥ ၁၈ လုံးကို ချိန်ညှိပြခဲ့တဲ့ အီရတ်အမျိုးသား
ဂင်းနစ်ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ဖို့အတွက် လက်ဖမိုးပေါ်မှာ ကြက်ဥ ၁၈ လုံးကို ချိန်ညှိပြခဲ့တဲ့ အီရတ်အမျိုးသား အီရတ်အမျိုးသားတစ်ဦးသည် ၎င်း၏လက်ဖမိုးပေါ်တွင် ကြက်ဥ ၁၈ လုံးကို ချိန်ညှိခြင်းဖြင့် ဂင်းနစ်ကမ္ဘာ့စံချိန် မှတ်တမ်းဝင်နိုင်ခဲ့သည်။ Ibrahim Sadeq သည် အီရတ်နိုင်ငံ၊ Nasiriyha ...
သောကြာသားသမီးတွေရဲ့ သိကောင်းစရာ( ၁၁ )ချက်သောကြာသားသမီးတွေရဲ့ သိကောင်းစရာ( ၁၁ )ချက်
💓တစ်ယောက်ဆိုတစ်ယောက်ပဲ သစ္စာရှိရှိ ချစ်တတ်ကြတာ👉သောကြာ😃 💓ကိုယ့်ချစ်သူအပေါ်မှာအပြင်ပန်းက ဂရုမစိုက်သလို နေတတ်ပီး အမြဲတမ်းတွေးပြီးပူပန်ပေးတတ်တာ👉သောကြာ😃😃 💓ဝမ်းနည်းတတ်တဲ့စိတ်ကိုအပြင်ကိုထုတ်ပြလေ့မရှိပဲစိတ်ထဲကပဲ ကျိတ်ပြီးဝမ်းနည်းနေတတ်တာ👉သောကြာ😃 💓ဖြစ်လာသမျှအရာရာကို ရင်ဆိုင်ရဲသလိုဖြစ်မလာသေးတဲ့အရာတွေကိုလဲကြိုပြီးစဉ်းစားတတ်လေ့ရှိတာ👉သောကြာ😃 💓အပြင်ပန်းကြည့်ရင်မာနကြီးတယ်လို့် ထင်ရလောက်ပေမဲ့ တကယ်တမ်းပေါင်းကြည့်မှ ပေါတောတောလေးမှန်းသိရတာ👉သောကြာ😃 💓စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းကို မက်မောပြီး တခါတလေတစ်ယောက်ထဲပဲအေးအေးဆေးဆေးနေရတာကို သဘောကျတာ👉သောကြာ😃 💓စိတ်ရှုပ်ရမယ့်အရာတွေကို ...
ဝက်ကလေးတစ်ကောင်ကိုအိမ်ပေါ်ခေါ်တင်ကာမွေးမြူထားပြီး ကိုယ်ပိုင်အခန်းနှင့်အတူ…ဝက်ကလေးတစ်ကောင်ကိုအိမ်ပေါ်ခေါ်တင်ကာမွေးမြူထားပြီး ကိုယ်ပိုင်အခန်းနှင့်အတူ…
သာမန်အခြေခံလူတန်းစားတစ်ဦးအတွက်တော့ အိပ်စက်အနားယူရန်အတွက် အိပ်ရာပစ္စည်းအမျိုးအစုံကိုရရှိရန်မလွယ်ကူကြတာကိုလူတိုင်းသိနေကြလိမ့်မည်။သို့သော်လည်း ဗီယက်နမ်မှဝက်တစ်ကောင်ကတော့ အဆင့်မြင့်မြင့်ပင် ကိုယ်ပိုင်အခန်းထဲတွင်မွေ့ရာ၊ခေါင်းအုံး၊စောင်၊ဖက်လုံးများအပြင်ခြင်ထောင်လေးဖြင့်ဇိမ်ကျကျနေနေရပါတယ်။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံက မစ္စတာNguyen Hong Trang၏နေအိမ်တွင် ဝက်မကြီးကဝက်ကလေး၁၁ကောင်ကိုမွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုအခါတွင်ဝက်ကလေးတစ်ကောင်ဟာအခြားဝက်များကြားတွင်နို့လုစို့ရာတွင်မစို့နိုင်သဖြင့်သခင်ဖြစ်သူကအိမ်ပေါ်သို့ခေါ်ခဲ့ပြီး ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုစို့စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ရာမှ သားအရင်းတစ်ဦးလိုပင်အိမ်ပေါ်၌သာခေါ်ထားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Credit Shoon (Cele Daily) Zawgyi Version ...